Automation of the HOA.
1c VDGB Uhlelo Accounting e izinkampani ukuphathwa HOA kusekelwe 1c: Izimali 8 futhi yakhelwe ukuze kwenziwe lula umsebenzi izinkampani ezihlinzeka amasevisi emkhakheni ekubalweni ukukhokhelwa efulethini kanye nezinye izinto, kanye ukuziphatha yephasiphothi yokubhalisa abaqashile.
Lolu hlelo mkhulu kuzo zombili izinkampani ezinkulu futhi isiphetho encane isikhungo HOA.
Ukucushwa 1c 8 HOA efanelekayo izikhungo abasebenza emkhakheni kwemisebenzi yomphakathi, njenge:
- UMnyango wezeZindlu, ihhovisi izindlu, ZHEUK;
- cottage emizaneni;
- igalaji izakhiwo;
- ama cooperatives suburban;
- Izinkampani Ukuphathwa;
- zokuhlala izikhungo.
Amathuba VDGB HOA zihlanganisa ukuqaliswa abanikazi ezimali noma abaqashi: imininingwane izinhlangano ezingokomthetho, kanye abaqashi behlupha ezindlini kanye izakhiwo bezentengiselwano, ezifana imoto amapaki, ipasipoti imininingwane abaqashile, kuhlanganise yokubhalisa, ukushintshwa kwegama, ushintsho kwemibhalo nokwesula ukubhaliswa. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo ngokuzenzakalelayo ukudala izinhlobo ipasipoti ephrintiwe samuntu.
1c hlelo ngoba HOA kuhlanganisa ukudalwa database, okuyinto igcina ulwazi mayelana nazo zonke izici isakhiwo: inani phansi futhi kovulandi, endaweni inani endaweni ngayinye izakhiwo zokuhlala noma okungezona zokuhlala, lokhu okuyinhloko banesibopho besakhiwo. Ngaphezu kwalokho, ukucabangela kungenzeka izici ezengeziwe ezaziphase isakhiwo, abasebenzisi kudingeka.
isizinda Imininingwane wadala ngosizo lolu hlelo luhlanganisa izici ngamunye efulethini ngabanye noma ehhovisi: isibalo amakamelo, isimo egumbini, usayizi waso, uhlobo ubunikazi, kanye neminye imingcele.
Nge HOA ngoba uhlelo nethuba ukucabangela ngesikhathi esisodwa eziningi eziningana yokupaka, kanye izikhala ehlukile izimoto ngamunye yokupaka.
Ukuhlanganiswa umkhiqizo nge 1c accountant ivumela ezimali izilinganiso, kufaka phakathi intela ukubala. 1c HOA ivumela sibalo intela ku izinhlelo ezahlukene, kokubili ejwayelekile kanye lula.
Ngosizo 1c: Izimali e izinkampani ukuphathwa HOA ungakwazi ukudla futhi ukubala olunembile amacala for amasevisi ishayise ngamazinga, inani lokuphila isikhala floor. Kukhona nethuba kokufaka yamanani siqu abantu abaphila phansi nesibongo lesi sakhiwo.
Ukubala intela imba ikhumbula izinzuzo kanye nemixhaso, amacala ngoba ukusetshenziswa yokupaka, accounting ukusebenza ngabanye kanye evame ukubuzwa yibo bonke tibali ezaziphase isakhiwo, kanye ukubala futhi accrual inhlawulo abakweletayo futhi defaulters - konke lokhu kukhona nge izinhlelo 1c ngoba HOAs.
Ngalolu hlelo 1c HOA angafeza ezimali, kanye ekubalweni izinkokhelo ngaphakathi olulodwa Imininingwane egciniwe, lokuboniswa ngokuzenzekelayo zonke isenzo.
Phakathi izici uhlelo sihlanganisa izindleko izilinganiso izindleko ezihlukahlukene, kanye Ukuvalwa kwe-akhawunti ngesisekelo tilinganiso ukulawula ekwenzeni lokho okuhleliwe. Kungenzeka futhi ukuba bafeze izabelo ezihlukahlukene uma ushintsho izimali nganoma yisiphi sokukhokha.
1c VDGB Accounting abaphathi izinkampani HOA ikuvumela ukudala Inani lemibiko, izitifiketi futhi imibhalo.
Izindleko lokulandisa izidingo ezahlukene HOA cishe okuzenzakalelayo ngokuphelele: ukusatshalaliswa izindleko ngezinto zokwakha kanye nezinsizakalo ngokuhambisana nemingcele ebekiwe, ukwakheka izenzo ukuletha umsebenzi kanye nezindleko imibiko.
Kanjalo, isimiso 1c HOA kungaluqinisa kakhulu lula kakhulu nezinqubo ezimali, isiphetho kanye imvume ngokwakha a database enkulu futhi ezishintshayo.
1c VDGB ukuthenga condominiums unga kusayithi 1c Market. Inikeza zesofthiwe ezinelayisensi nezidingo izinkampani ezahlukene ukuphathwa. Uhlole ikhathalogi nge Ukukhetha eziningi imikhiqizo, uzokwazi ukuqhathanisa izixazululo ezahlukene, ukusebenza kwabo futhi izindleko, futhi ukukhetha uhlelo kangcono HOA yakho.
It Outsourcing - ubuqili kanye izimfihlo
Ubani lo Tomboy? okusho
Ivan Petrovich Pavlov: Biography emfushane futhi umnikelo isayensi
Pushkin Theatre, Magnitogorsk: umlando, repertoire, ukubuyekezwa
Imigudu ende kunazo zonke emhlabeni. Omude kunayo yonke owake undersea Umhubhe emhlabeni
Indlela ukubhala isenzo: "probyvat" noma "ukunambitheka"?
Wendlala ultrasound - inkomba, ukulungiselela nasekubulaleni amasu
Kusho "Psili Amafutha". imfundo
I-Grim Dawn: idlula futhi ibukeza umdlalo